प्रदेश सरकारको बजेट आज: कुन प्रदेशले ल्याऊला आकर्षक बजेट ? - Jagaran Post
Home/अर्थ बजार/प्रदेश सरकारको बजेट आज: कुन प्रदेशले ल्याऊला आकर्षक बजेट ?
अर्थ बजारकर्णाली प्रदेशगण्डकी प्रदेशप्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३प्रदेश ५सुदुरपश्चिम प्रदेश
काठमाडौं : सातवटै प्रदेशले आज प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संविधान कार्यान्वयनमा आएयता उनीहरुले दोस्रोपल्ट बजेट ल्याउन लागेका हुन् । यसअघि संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा रहेर बजेट निर्माण भएको छ जसमा प्रदेशहरुले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग तथा दीर्घकालिन महत्व तथा प्रादेशिक महत्वको आयोजना प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
प्रदेशहरुले मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । आइतबार दिउँसो प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कुन प्रदेशको बजेट कस्तो ?
प्रदेशहरुले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ ले ४३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेअनुसार प्रदेश १ को बजेटको प्राथमिकता पनि कृषि, पर्यटन, दीर्घकालीन योजना, भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित रहने । औद्योगिकरण र जल पर्यटनलाई उक्त प्रदेशको बजेटले विशेष महत्व दिने भएको छ।
चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेश २ ले ३८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने बताइएको छ । बजेटको प्राथमिकता सरकारले चालु आवको झैं कृषि, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण रहेको छ । चालू आवका लागि यस प्रदेश सरकारले २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यसैगरी प्रदेश ३ ले ४८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ । यस प्रदेशको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता वरिपरि रहनेछ । जसअनुसार पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन आदि विषयमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । चालू आवका लागि प्रदेश २ सरकारले ३५ अर्बरुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेको छ। बजेटको प्राथमिकता पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग रहेछ । चालू आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
यसैगरी प्रदेश ५ ले ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने भएको छ । यस प्रदेशको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता वरिपरि रहनेछ । जसअनुसार भौतिक पुर्वाधार निर्माण, कृषि तथा वातावरण, अपुरा योजनाहरु लगायत आदि विषयमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । चालू आवका लागि यस प्रदेशले २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने बताइएको छ । बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल रहेका छन् । चालू आवका लागि यस प्रदेश सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको प्राथमिकता कृषि, पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी आदि रहेका छन् । चालू आवका लागि यस प्रदेश सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बोधिचित्त बेचेर ३ करोड
२०७६ असार २०, शुक्रबार ०६:१६ गते
भारतीय नागरिकले सशस्त्रको हतियार खोसेपछि सिमामा झडप, एकको मृत्यु, ५ घाइते
२०७७ जेष्ठ ३०, शुक्रबार १३:४६ गते